तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ - मूल्याङ्कन अनलाइन
मंसिर ३, दोलखा
आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने “अव सिभिलतर्फको काम १० प्रतिशत मात्र बाँकी छ ।” इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि सामान आयोजनास्थलमा पुर्याउने काम भइरहेको छ । खाडीचौरदेखि सिंगटीसम्मको प्रवेश मार्ग कालोपत्र सडक विभागले अगाडि बढाएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, “हेभी इक्विपमेन्ट’ आयोजना स्थलसम्म पुयाउर्न कठीन भएको छ । अहिले विद्युत् गृह जडानको काम अगाडि बढेको छ । कंक्रिटको काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन रातदिन काम भइरहेको छ । उनकाअनुसार टर्वाइन र प्रसारणलाइन निर्माणको काम पनि जारी छ । प्रसारणलाइनका लागि ठड्याउनुपर्ने १४७ वटा पोलमध्ये १६ वटा मात्र बाँकी छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको लागत रु. ३५ अर्ब ३० करोड छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको रु. १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको रु. ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषको रु. २ अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रु. २ अर्ब लगानी छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिनुपर्ने शेयर चुनावलगत्तै निष्कासनको तयारी गरेको छ । त्यसमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी जिल्लावासीलाई शेयर वितरण गरिनेछ ।
« ‘सुरक्षा चुनौती गम्भीर’ (Previous News)
(Next News) दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि रु. १ करोड बराबरको जग्गादान »